AirTag inotsvaga bhasikoro mune yekufananidzira kuba Ndinobva mac
Toni Cortes | 15/05/2021 14:00 | dzakawanda
Pasina mubvunzo iyo AirTag Yava yemafashoni. Chishandiso chidiki cheApple chiri kuzotengeswa kunge hotcake. Ndine chokwadi. Iyo tracker yakabatanidzwa muApple's "Tsvaga" ecosystem, ine bhatiri rinogara kwegore, uye rinodhura 35 maEuro. Assured kubudirira.
Pakati pese "bullshit" ivo varikuitira varombo AirTag mukati YouTube, tawana vhidhiyo inonakidza kwazvo. Vakafananidza kuba bhasikoro, iro raive rakavanzika AirTag. Vakariwana here?
Chitoro chebhasikoro chaida kuyedza kana zvakakodzera kuviga AirTag pabhasikoro, uye nekudaro ukwanise kuiwana kana yakabiwa. Kwemaeuro makumi matatu nemashanu, waifanirwa kuratidza kuti inoshanda here kana paba, uye gara uchizvitakura zvakavanzika pabhasikoro. Uye chokwadi ndechekuti vakamuwana.
Chitoro chakatanga nekugadzirisa iyo AirTag se bhasikoro, ndokuzoirovera pasi pechigaro chebhasikoro rakamiswa kunze kwechitoro. Mbavha "yaifungidzirwa" yakatora bhasikoro rayo ikaenda kunzvimbo isingazivikanwe. Vakamirira maminetsi gumi, akareba zvakakwana kuti "mbavha" ive kure nechitoro, ndokutanga kutsvaga.
Vakawana pekutanga nzvimbo maminetsi masere mushure mekubirwa kwekuba, uye wechipiri mushure memaminetsi makumi maviri. Iyo nguva yakati rebei ingangodaro inoratidza chokwadi chekuti yaive diki vanhu, saka vanhu vashoma vaive mumugwagwa panguva iyoyo. Pamusoro pezvo, iyo 'mbavha' yairamba ichifamba, saka mukana wega wekuvandudzwa kwenzvimbo yaive munguva pfupi apo bhasikoro rakapfuura padyo nenzvimbo. iPhone sokunge kuti kuratidza kuvapo kwavo.
Zvipikiri pamusoro nzvimbo shoma Ivo vakakwanisa kuudza kwaienda mbavha yebhasikoro kwaienda, uye fungidzira kuti ndedzipi nzira dzaangasarudza ivo vachienda. Muguta rine vanhu vazhinji, vangadai vasina kugona kufungidzira kuti mbavha yaienda kupi, asi nzvimbo yacho ingadai yakanyatsojeka, vawana maPhones akawanda munzira.
Zvakatora hafu yeawa kutsvaga bhasikoro rakabiwa
Nzvimbo yechitatu yakaitika maminetsi makumi maviri nematanhatu mushure me "kuba", uye wechina pa 33 maminitsi. Bhasikoro raive munzvimbo yekugara, uye yaive iri panyama hafu yeawa mushure mekubirwa.
Apple haina kushambadza AirTag seye anti-kuba mudziyo, asi inogona kuiswa kune iko kushandiswa pasina dambudziko. Saka zvinopfuura chimwe chete chinozohwanda ibhasikoro rake, sikuta kana mota, pasina kupokana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » AirTag inotsvaga bhasikoro mune yekufananidzira kuba